/ब्लग/ग्यालरी/Oxandrolone (Anavar) को बारेमा सबै कुरा, तपाईंले थाहा पाउनु आवश्यक छ
प्रकाशित 10 / 26 / 2019 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
Oxandrolone के हो (अनवर)?
ओक्जेंड्रोलेन (53-39-4), यसको ब्रान्डको नामको रूपमा अनवर पाउडरसँग, एक सिंथेटिक एन्ड्रोजन र एनाबोलिक स्टेरॉइड (एएएस) औषधि हो जुन यसको शक्ति र उर्जा - बृद्धि गर्ने क्षमताहरूको लागि धेरै लोकप्रिय छ। यो सबैभन्दा धेरै ज्ञात र प्रयोग हुने मौखिक एनाबोलिक स्टेरॉइड्स बीच हो। एनाबोलिकको मतलब यो हो कि यसले कोष प्रोटिनहरूलाई बढावा दिन्छ, जसले गर्दा मांसपेशीहरूको द्रुत बृद्धि र हड्डीहरू कडा हुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन एनालॉग हुनुको (यसको संरचना टेस्टोस्टेरोनको जस्तै छ), अनवरले विशिष्ट आणविक रिसेप्टर्स सक्रिय गर्दछ र उनीहरूसँग टेस्टोस्टेरोनको तरीकामा बाँध्छ। त्यस कारणले गर्दा यो टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन थेरापीमा उपयोगी हुन सक्छ।
Oxandrolone (Anavar) पाउडर (-53 39--4--XNUMX) दुबै पुरुष र महिला दुबै महिलाले प्रयोग गर्नका लागि सुरक्षित छ जब सही डोज पालन गरिन्छ। अझ राम्रो, यसको सम्भावित साइड इफेक्टहरू सामान्यतया हल्का हुन्छन्। जस्तो कि, एचआईभी-बर्बाद गर्ने सिन्ड्रोम वा पुरुष हाइपोगोनैडिज्मबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि यो समाधानको समाधान हो किनभने यसले नाइट्रोजनको अवधारण र साथै फ्याट-फ्रि मांसपेशीहरूको सुधार गर्दछ।
यदि तपाईं कुनै पुरुष वा महिलाको लागि नम्र तर द्रुत एनाबोलिक स्टेरोइड खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं ओक्सान्ड्रोलोन पाउडरको साथ गलत हुन सक्ने छैन (53-39-4)। केही व्यक्तिहरू, अनवर रेडिडिट समीक्षामा पनि, यसलाई "द गर्ल स्टेरॉइड" भन्छन् किनकि यो केहि स्टेरोइडहरू मध्ये एक हो जुन महिलाको बहुमतसँग राम्रोसँग जान्छ।
Oxandrolone को इतिहास
Oxandrolone (अनावर) पहिलो पटक १ 1964 .XNUMX मा Searle Laboratories (वर्तमानमा फाइजरको सहायक कम्पनी) मा वर्णन गरिएको थियो। कम्पनीले सेलेब्रेक्स, न्युट्रास्वेट र एम्बियन जस्ता अन्य प्रमुख औषधीहरूको पनि निर्माता छ। यो राफेल पप्पो र क्रिस्टोफर जे जंगको सहयोगी प्रयासहरूको आविष्कार हो।
अनुसन्धान विज्ञहरू औषधिको एनाबोलिक प्रभावहरूको सम्बन्धमा ओक्सान्ड्रोलोनको अत्यन्त कमजोर एन्ड्रोजेनिक प्रभावहरूद्वारा उत्सुक थिए। पछि उनीहरूले १ 1964 .XNUMX मा औषधी एकको रूपमा प्रस्तुत गरे अनैच्छिक वजन घटाउने साथै एचआईभी / एड्स उपचारका साथ व्यक्तिहरूमा मांसपेशीको वृद्धिलाई बढावा दिनका लागि औषधि औषधि।
दुर्भाग्यवश, बडिबिल्डर्सले ड्रग्सलाई धेरै हदसम्म दुरुपयोग गरेको थियो, र यसले नकारात्मक प्रचारलाई बढावा दियो। नतिजाको रूपमा, Searle प्रयोगशालाहरूले यसलाई 1989 मा बन्द गर्‍यो।
धेरै वर्ष पछि, बायो-टेक्नोलोजी जनरल कर्पोरेशन (बायो-टेक्नोलोजी जनरल कर्पोरेशन) ले औषधिको अनुसन्धान र विकासलाई ग्रहण गर्‍यो। क्लिनिकल परीक्षणहरू जुन कम्पनीले 1995 मा औषधिमा गरेको थियो यसको दोस्रो रिलीजमा नेतृत्व गर्दछ, तर त्यसपछि Oxandrin (ब्रान्ड नाम) अन्तर्गत।
त्यस समयमा, एनाबोलिक स्टेरोइड औषधि विभिन्न ब्रान्ड नामहरूमा उत्पत्ति सहित बेचिन्थ्यो ओक्जेंड्रोलेन र Oxandrin, विश्वव्यापी। यद्यपि यो पछि यसको हालको अमेरिकी ब्रान्ड नाम, अनवरमा समेकित गरियो।
समयको साथ, खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) ले टर्नर सिन्ड्रोम, एचआईभी-प्रेरित वजन घटाउने साथ साथै एचआईभीको कारणले वजन घटाउने उपचारको रूपमा अनाथ औषधि स्थितिको लागि ओक्सान्ड्रोलोनलाई अनुमोदन गर्‍यो।
Oxandrolone मार्केट र भूमिगत बजार दुबै प्रयोग
Oxandrolone उत्पादन गर्न धेरै महँगो छ र यसको निर्माण, बिक्री र खपत सम्बन्धी कडा नियमहरू छन्। यी अवरोधहरूलाई रोक्न र लागत बचत गर्न, त्यहाँ धेरै विक्रेताहरू छन् जसले भूमिगत रूपमा औषधि निर्माण र बिक्रीको व्यवसाय लिएका छन्।
दुर्भाग्यवश, कालो बजार 'Oxandrolone' निरुपयोगी तहखाने प्रयोगशालाहरूमा निर्माण गरिन्छ जहाँ आवश्यक मापदण्डहरू विरलै पालना गरिन्छ। नतिजा स्वरूप, कालो बजार वा भूमिगत प्रयोगशालाबाट कानूनी अनावर पाउन प्रयोगकर्ताहरूलाई गाह्रो छ। इच्छित परिणामहरू प्रदान नगरीकौं, त्यस्ता औषधिले प्रतिकूल साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ।
भूमिगत बजारमा बिक्रीको लागि अनवरको साथ अर्को समस्या यो हो कि यो नाबालिगहरूले समेत दुरुपयोग गर्न सक्छन् किनभने त्यहाँ उनीहरूको अधिग्रहण र प्रयोगमा रोक लगाउने कुनै नियमहरू छैनन्।
यदि तपाईं प्रामाणिक र सुरक्षित अनवर प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो बनाउनुहुन्छ Oxandrolone पाउडर खरीद एक इजाजतपत्र प्राप्त र कानूनी तौर पर विनियमित विक्रेता बाट। यद्यपि यस्तो विक्रेताहरूबाट एक Oxandrolone खरीद ब्लैक-मार्केट वालेको तुलनामा मूल्यवान हुन सक्ने सम्भावना छ, तिनीहरू यसको लागि लायक छन्।
तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईं वास्तविक कच्चा पाउडर वा अन्तिम उत्पादन पाउँदै हुनुहुन्छ किनकि त्यस्ता बहुसंख्यक विक्रेताहरूले उनीहरूको इजाजतपत्र गुमाउने खतरा मोल्दैनन् अनौंथनिक उत्पादन बेच्दा परिणाम स्वरूप। AASraw वास्तविक Oxandrolone को सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बीच हो।
Oxandrolone मूल्य सामान्यतया उच्च छ। त्यसोभए, यदि तपाईं एक 'गहिरो छुट' मूल्यमा ड्रग बेच्न विक्रेता भेट्न आउनुभयो भने, विक्रेता इजाजतपत्र पाएको छ वा छैन र कानुनी रूपमा अपरेट गर्दछ कि तपाईं एक प्रतिबन्ध उत्पादनको साथ समाप्त नभएको कुराको लागि संचालन गर्नुहुन्छ।
अनवर / ओक्सान्ड्रोलोन उत्पादन गर्नको लागि महँगो पदार्थ हो, र यसलाई 'गहिरो छुट' मूल्यमा प्रस्ताव गर्ने कुनै पनि व्यापारीबाट सामान्य रूपमा बेच्न सल्लाह दिइन्छ। तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुन्छ अनवर समीक्षा यदि विक्रेताले कानुनी रूपरेखा भित्र अपरेट गर्दछ र यदि उनीहरूको उत्पादनहरू प्रामाणिक छन् भने। अनवर समीक्षाले तपाईंलाई औषधि किन्नको लागि उत्तम ठाउँहरू सम्बन्धी सुझाव पनि दिन सक्छ।
अमेरिका र अन्य देशहरूमा Oxandrolone कानून शर्त
अमेरिकामा, नियन्त्रित पदार्थ अधिनियमले ओक्सान्ड्रोलोन / अनावरलाई वर्गीकरण गर्दछ, धेरै अन्य एन्ड्रोजन र एनाबोलिक स्टेरॉइडलाई तालिका III नियन्त्रित पदार्थको रूपमा। यसको मतलब यो हो कि एक व्यक्तिले यसलाई लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सक र फार्मेसी मार्फत प्राप्त गर्नु पर्छ।
अनुसूची III मा एक औषधि को अवैध कब्जा संग एक व्यक्ति मा चार्ज कानूनी दण्ड Anabolic स्टेरियोड पाउडर Oxandrolone वा अन्तिम अनावर को, एक राज्य को लागी विशिष्ट प्रासंगिक कानून मा निर्भर छ।
धेरै जसो केसहरूमा अपराधीहरूलाई जेलमा राखिन्छ र जरिवाना तिर्दछ। नियन्त्रित पदार्थ कानूनको अनुसार, Oxandrolone लाई सम्बन्धित केही अपराधहरुमा पर्चेको नक्कली अधिग्रहण र मान्य पर्ची बिना औषधि राख्नु समावेश छ।
बेलायतमा, Oxandrolone एक नियन्त्रित पदार्थ मध्ये छ तालिका IV वर्गीकृत; सबै एनाबोलिक स्टेरोइडहरू यो कोटीको हो।
क्यानाडामा, अक्सान्ड्रोलोनसम्बन्धी देशका कानूनहरू यूकेमा 1996 सम्म समान थिए जब कानून संशोधन भएन, तालिका IV बाहेक। नतिजा स्वरूप, कानुनी समस्याहरूको बारेमा कुनै स्पष्ट मार्गदर्शन छैन जुन औषधीको अधिकारमा रहेको छ, वर्तमानमा जसले यसलाई लिन्छन् र जो यसको स्वामित्वमा इच्छुक छन्।
यद्यपि क्यानाडाली स्टेरोइड कानूनमा सावधानीपूर्वक भनिएको छ कि देश भित्रका व्यक्तिले औषधि किन्न सक्दैन जबसम्म उनीहरू किन किन्नुको कारण बताउँदैनन्। दिइएको कारणमा निर्भर गर्दै, विक्रेताले खरीद अनुरोध स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्दछ। स्टेरोइड किन्न को लागी कम्तिमा days० दिन पछि अर्को अर्को बनाउनु पर्छ।
मा अस्पष्टता क्यानाडाको ड्रग कानूनहरू, विशेष गरी जहाँसम्म ओक्सान्ड्रोलोन, आफ्ना अधिकारीहरूलाई मनोरञ्जन प्रयोजनका लागि स्टेरोइड प्रयोग गरेको पाइन्छ जहाँ मामला मा स्वतन्त्र न्याय गर्न सक्षम गर्न जानबूझकर लचिलो देखिन्छ। जे होस्, धेरै जसो केसहरूमा, पहिलो अनवर-सम्बन्धित अपराधले 2000 महिना भन्दा बढीको जेल र अवधिलाई आकर्षित गर्दछ।
चीनमा Oxandrolone कच्चा माल सर्त
अक्सान्ड्रोलोन जस्ता स्टेरोइडको निर्माण धेरै देशहरूमा अत्यधिक नियन्त्रणमा छ र यसले यसको उत्पादकहरूको संख्या सीमित गर्दछ।
यद्यपि अमेरिकालगायत बिभिन्न देशहरुमा कालो बजार संचालकहरु कानुनी कमीबाट फाइदा उठाउँदै ओक्सान्ड्रोलोन कच्चा माल आयात गर्न र औषधी उत्पादन र बेच्न सम्बन्धित सरकारी नियामक निकायको ज्ञान बिना।
चीनसँग अक्सान्ड्रोलोनको कच्चा पाउडरको दशौं अधिकृत विक्रेताहरू छन्। यसले उत्पादनलाई क्रेताहरू भन्दा बढि देशमा उपलब्ध हुने बनाउँदछ जो यसलाई बढि प्रशोधनको लागि खरीद गर्न मनपराउँदछ। दुर्भाग्यवस, चीनबाट केही कच्चा ओक्सान्ड्रोलोन पाउडर आयातहरू मिलावटी हुन्छन्, जसले विश्वभरि कन्स्ट्रब्यान्ड अक्सान्ड्रोलोनको उत्पादन र बिक्री गर्दछ।
तपाइँ Oxandrolone संग के आशा गर्न सक्नुहुन्छ?
Oxandrolone प्रयोगकर्ताहरूको बहुमत मांसपेशियों को विकास को माध्यम बाट वजन प्राप्त गर्न स्टेरोइड ले। यो मुख्यतया संक्रमण वा शल्यक्रियाको परिणाम स्वरूप गम्भीर तौल घटाउने अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न हो।
आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, अनवरको प्रयोगको परिणामस्वरूप तौल बढाउनु दुबै मांसपेशीहरूको समूह हो किनभने औषधि द्वारा आपूर्ति गरिएको हर्मोन सुगन्धित हुँदैन। त्यस्तै रूपमा, तपाईंको शरीरले स्टेरोइड प्रयोगको परिणाम स्वरूप अत्यधिक पानी प्रतिधारण अनुभव गर्दैन। यस औषधिको नतीजाको बारेमा अर्को भययोग्य यो यो हो कि प्रयोगकर्तालाई परिणामस्वरूप तौल फाइदा होल्ड गर्न सजिलो हुन्छ।
यद्यपि औषधीले नाफा प्रदान गर्न सक्दैन जुन टेस्टोस्टेरोन र एनाड्रोल जस्ता अन्य लोकप्रिय मास एजेन्टको प्रयोगको परिणाम जस्तै हो, यो केवल मध्यम लाभको खोजीमा रहेका व्यक्तिको लागि उपयुक्त हुनेछ। यसैले प्राय: जसो महिलाहरू यसलाई मन पराउँछन् किनकी तिनीहरू मध्ये धेरै जसो केवल हल्का मांसपेशिको वृद्धिमा रुचि राख्छन्।
तपाई पुरुषहरुका लागि अनवर चाहानुहुन्छ वा महिलाका लागि अनवर अफ सिजनको अवधिमा सामूहिक लाभको लागि, तपाईं निश्चित रूपमा Oxandrolone को मेटाबोलिक बूस्टिंग लक्षणहरू मनपर्नुहुनेछ। तपाईं अन्य शक्तिशाली स्टेरोइड प्रयोग गर्नुहुँदा तुलनामा तपाईं अफ-सिजन शरीर बोसो को एक कम राशि प्राप्त गर्दछ कि तपाईं याद गर्नुहुनेछ।
पुरुषहरूको लागि अनवर वा महिलाको लागि अनवर तपाईलाई काटेको अवस्थाको बखत एक धेरै सहयोगी पूरक हुन सक्छ। औषधि स्वाभाविक रूपमा धेरै दृढतापूर्वक anabolic छ। त्यस्तै रूपमा, यो दुबै टिश्यु संरक्षणमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ जब एक डाइटिंग गर्दैछ।
जब तपाईं शरीरको बोसो बहाउन चाहानुहुन्छ, तपाईंको क्यालोरी सेवन तपाईं अधिकतम दुबै टिश्यू मर्मतका लागि जलाउने क्यालोरीको मात्रा भन्दा कम हुनुपर्दछ। जे होस्, तपाईंको आहारमा पर्फेक्सनिमेस जस्तोसुकै भए पनि, तपाईं केहि मांसपेशीहरू हराउनुहुनेछ यदि तपाईंको शरीरमा एक शक्तिशाली एक मजबूत anabolic एजेंटको अभाव छ। यसको बलियो एनाबोलिक गुणहरू विचार गर्दा, त्यहाँ अनवर काम आउँदछ।
जब तपाईले काटेको अवस्थाको बखत अनवर प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईको शरीरले अझ बढी प्रभावकारी ढंगले बोसो जलाउन सक्षम हुनेछ। अन्तत: तपाईले सुधारिएको भास्कुलरताको अनुभव गर्नुहुनेछ र तपाई कडा र अझ परिभाषित देख्नुहुनेछ। किन धेरै पुरुषहरू अप्ट इन गर्छन् वजन घटाउन को लागी अनवर.
Anavar एथलीटहरु को लागी एक मनपर्दो स्टेरोइड विकल्प हो किनभने यसको उल्लेखनीय शक्ति बृद्धि क्षमता। यद्यपि यसमा यसको प्रभाव अन्य स्टेरोइडहरू जस्तै हलोटेस्टिन वा डियानाबोल जस्ता स्पष्ट गरीएको छैन।
एक एथलीट को शक्ति उसको / उनको गति र शक्ति लाई प्रभाव पार्छ, दुबैको उनको / उनको समग्र एथलेटिक प्रदर्शनमा सीधा प्रभाव पार्दछ। खेलाडी जति बलियो छ, तिनीहरूको प्रदर्शन राम्रो छ।
शक्ति बाहेक, एथलीटहरू अपेक्षाकृत हल्का मानिन्छ र त्यसैले, विशाल मांसपेशि निर्माण-कार्यहरू चाहँदैनन्। किनभने यसले व्यक्तिलाई उनीहरूको मांसपेशी निर्माणमा वृद्धि बिना नै बलियो गर्दछ, अनवर एक उपयुक्त एथलेटिक वृद्धिकर्ता हुन्छ। अझ राम्रो, यो पानी प्रतिधारण को नेतृत्व गर्दैन, जो अन्यथा एक एथलीट को लागी एक प्रदर्शन बाधा हुन सक्छ।
चाहे तपाईले अनवरलाई केहि मोटा बहाउन प्रयोग गर्नुभयो वा तपाईको एथलेटिक प्रदर्शन सुधार गर्नुहोस्, तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि एक पटक तपाईले औषधि लिईएको अनुसार तपाईको रिकभरी रेटमा उल्लेखनीय सुधार हुन्छ। यसका साथै यसले तपाईको मांसपेशिको सहनशीलता पनि बढाउँछ।
नतिजाको रूपमा, तपाईं शारीरिक गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्दा थकित हुनुभन्दा पहिले लिनुहुनेछ, यसैले कडा बनाउनको लागि र लामो विस्तारहरूमा क्षमता। यसले तपाईंको शारीरिक प्रशिक्षण सत्रबाट अधिक फाइदा लिन मद्दत गर्दछ।
Oxandrolone साइड इफेक्ट
यहाँ लोकप्रिय स्टेरोइड्स को बहुमत को सामान्य साइड इफेक्ट छन्। आउनुहोस् हामी हेरौं कि ऑक्सान्ड्रोलोन साइड इफेक्टसँग तिनीहरूलाई केहि गर्न छ।
जस्तो स्टेरोइड जस्तो मनपर्दैन Trenbolone त्यो सुगन्ध, यसैले gynecomastia कारण, Oxandrolone द्वारा आपूर्ति हर्मोन estrogenic साइड इफेक्ट को कुनै पनि रूप पैदा गर्दैन। यसको कारण यो पानी प्रतिधारण कारण छैन जो अन्यथा एस्ट्रोजेन स्तर बढ्न बनाउँछ। पानी प्रतिधारण मुक्त सम्पत्तिले प्रयोगकर्तालाई उच्च रक्तचापको कम कमजोर बनाउँछ।
ओक्सान्ड्रोलोनको एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट हुने संभावना नहुनु पनि तथ्य यो छ कि यसले प्रोजेस्टिनसँग सम्बन्धित कुनै गतिविधिलाई सहँदैन।
यद्यपि Oxandrolone धेरै androgenic छैन, यसले हल्का androgenic गतिविधि ल्याउँदछ। त्यस कारणले, यसको प्रयोग गर्ने मानिसमा एक्ने हुने सम्भावना हुन्छ र जो पुरुष पैटर्नको टक्कलमा अत्यधिक संवेदनशील हुन्छन् स्टेरोइडको प्रयोगपछि कपाल झर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
महिलाका लागि अनवरले एन्ड्रोजेनिक प्रभावहरू उत्पादन गर्न सक्दछ जसले शरीरमा कपालको बृद्धि, गाढा मुखी तारा र महिलामा विस्तारित भगशेफ जस्ता भाइरलाइज लक्षणलाई बढावा दिन सक्छ। यद्यपि लक्षणहरूलाई ठीक लिएर रोक्न सकिन्छ Anavar dosage.
यदि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ र तपाईं भाइरलाइजेशन लक्षणहरू अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई तुरून्त औषधि प्रयोग रोक्न सल्लाह दिइन्छ। त्यसो गरिसकेपछि, लक्षणहरू हराउनु पर्छ। अन्यथा, लक्षणहरू तपाईंको अंश हुन सक्छन् यदि तपाईं तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुभयो र स्टेरोइडसँग जारी राख्नुभयो भने।
जे होस्, धेरै जसो स्टेरोइड प्रयोगकर्ताहरूले एन्ड्रोजेनिक साइड इफेक्ट अनुभव गर्दैनन् किनभने समग्र androgenic प्रकृति एकदम कम छ।
अन्य एनाबोलिक स्टेरोइडहरू भन्दा फरक जुन सम्भावित एन्ड्रोजेनिक साइड इफेक्टहरू रोक्नको लागि 5-alpha Redctase इनहिबिटरहरूको साथ साथ प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, अनवर अवरोध बिना नै सुरक्षित र हल्का छ। यो किनभने5- अल्फा रिडक्टेस एन्जाइम टेस्टोस्टेरोनलाई dihydrotestosterone लाई कम गर्नको लागि हो, तर Oxandrolone पहिल्यै dihydrotestosterone भएको हुनाले यसको एन्जाइमको आवश्यकता पर्दैन।
सबैभन्दा गम्भीर अक्सान्ड्रोलोन साइड इफेक्टहरू मध्ये एक कोलेस्ट्रोलको साथ केहि चीज हो। अक्सान्ड्रोलोन हर्मोनले एचडीएल कोलेस्ट्रॉललाई 50% सम्म दबाउँछ जबकि LDL कोलेस्ट्रोलको स्तर 30% सम्म बढाउँदै।
यी कोलेस्ट्रॉल परिवर्तनहरूको कारण, कोलेस्ट्रोल मुद्दाहरू भएका व्यक्तिहरूलाई ओक्सान्ड्रोलोन प्रयोग गरेर पूरकबाट अलग रहन सल्लाह दिइन्छ। अन्यथा, यसको प्रयोगको लागि पर्याप्त स्वास्थ्यकरहरूलाई कोलेस्ट्रोलमैत्री खानाको साथ उच्च स्तरको फ्याट्टी एसिडहरू र धेरै हृदय गतिविधिहरू प्रदर्शन गरेर स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
यो औषधि प्रयोग गर्दा, यो संतृप्त फ्याटको साथसाथै साधारण चिनीमा कटौती गर्न सल्लाह दिइन्छ। तपाईले कोलेस्ट्रोल एन्टिआक्सीडन्ट पूरक समाहित गर्न सक्नुहुनेछ तिनीहरूको स्तर जाँचमा राख्न।
कुनै पनि स्टेरोइड जुन तपाईं लिनुहुन्छ Anavar, तपाईंको शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको प्राकृतिक उत्पादनलाई दबाउँछ। जे होस्, दमन दर एक स्टेरोइड भन्दा फरक छ। हाल बिक्रीमा रहेको अन्य स्टेरोइडहरूसँग तुलना गर्दा, अनवारसँग सबैभन्दा हल्का दमनकारी प्रभावहरू हुन्छन्। यो लगभग आधा द्वारा समग्र सीरम स्तर दबाउँछ।
जे होस्, अन्वरको प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन दमन प्रभाव थोरै भए पनि पुरुषहरूलाई एक्जोजेनस टेस्टोस्टेरोनको पूरक तत्त्वहरूको अंश बनाउन सल्लाह दिइन्छ। अन्यथा, अक्सान्ड्रोलोन हार्मोनले कम सम्भावित समस्याग्रस्त लक्षणहरू मध्ये एक कम टेस्टोस्टेरोन सम्बन्धित अवस्था निम्त्याउँछ।
यद्यपि केही पुरुषहरूले टेस्टोस्टेरोन सम्बन्धी कुनै समस्याको अनुभव गर्न सक्दैनन्। अनवर प्रयोग गर्दा पनि उनीहरूको टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन स्तर स्टेरोइडले 50% ले घटाए पनि। यो एक व्यक्तिको प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोनमा निर्भर गर्दछ। जे होस्, धेरै पुरुषहरूलाई स्टेरोइडको प्रयोगका कारण सम्भावित लक्षणहरू कम गर्न एक्जोजेनस टेस्टोस्टेरोन थेरापीको आवश्यकता पर्दछ।
भाग्यवस, अरू कुनै एनाबोलिक स्टेरोइड जस्तै, अनवरको प्रतिकूल टेस्टोस्टेरोन प्रभावहरू कुनै व्यक्तिले लिन बन्द गरेपछि यो हराउन थाल्नेछ। तर पूर्ण पुन: प्राप्ति हुन समय लाग्छ र त्यो पोस्ट साइकल थेरपी (पीसीटी) योजना सिफारिस गरिएको छ उपचारको स्टेरोइड कोर्स पूरा भएपछि। PCT ले रिकभरी प्रक्रियाको गति गर्दछ।
अनवार एक C17-aa हो Anabolic स्टेरॉयड र त्यसैले यसले कलेजोको क्षति निम्त्याउन सक्छ, सीधा छैन। स्टेरोइडको निरन्तर प्रयोगले कलेजोको इन्जाइम मानहरूमा उल्लेखनीय बृद्धि हुन सक्छ। कलेजोको बढेको एन्जाइमले कलेजोलाई तनाव गर्छ, यसको क्षति जोखिम बढाउँदछ।
त्यसोभए, तपाईंको कलेजोको स्वास्थ्यको लागि, कुनै पनि C17 -a एनाबोलिक स्टेरॉइड प्रयोग गर्नबाट जोगिनु महत्त्वपूर्ण छ, अनवर सहित तपाईलाई कलेजोको कुनै समस्या छ भने। साथै, धेरै कक्सी नखानुहोस् जब तपाईं C17-aa anabolic स्टेरॉइडसँग पूरक हुनुहुन्छ जस्तै Anavar तपाईंको कलेजोलाई अत्यधिक भारबाट जोगिनको लागि।
तपाईंको पूरक योजनामा ​​कलेजो डिटोक्सिफायरले ओक्सान्ड्रोलोन प्रयोग गर्दा तपाईंको कलेजो स्वास्थ्य बचाउन लामो यात्रा गर्नेछ। र किनकि स्टेरोइडको विस्तारित प्रयोगले कलेजोलाई हानी पुर्‍याउँछ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले अनभर पूरक अवधिलाई अधिकतम 8 हप्तामा सीमित गर्नु पर्छ।
जे होस्, अक्सान्ड्रोलोन पुरुषहरूको लागि उपयुक्त छ, अनवर चक्र पुरुषहरूमा यति कोमल छ कि अधिकांश पुरुष प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको बढ्दो आवश्यकताहरूको लागि विशेष रूपमा अफ-सिजन वा वृद्धि अवधिमा यसलाई अलि प्रभावशाली पाउँदछन्। जे होस्, तिनीहरू अझै पनि यसको दुब्लो मांसपेशी संरक्षणको लागि यसमा जोड दिइरहेका छन् जुन बहुसंख्यक प्रयोगकर्ताहरूका लागि मुख्य उद्देश्यहरू मध्ये एक हो। अझ राम्रो, औषधिले एक व्यक्तिको मेटाबोलिक गतिविधि सुधार गर्दछ।
महिलाको लागि अनवर चक्र
जबकि Oxandrolone हार्मोन द्रव्यमान बृद्धिका लागि छैन, महिला प्रयोगकर्ताले यसको प्रयोगमा 100% दुबला टिशू लाभ अनुभव गर्न असामान्य कुरा छैन। त्यस्तै, र यो तथ्यको लागि कि यो एक अत्यन्तै सहनशील स्टेरोइड हो र यो एक उच्च-गतिविधिसम गतिविधि भएको एथलेटिक महिलाहरूको लागि छनौट गर्न-जाने हो।
महिला ऑक्सान्ड्रोलोन प्रयोगकर्ताहरू जो डाइटिंगमा छन् र बृद्धि चरणहरूमा औषधिबाट धेरै फाइदा हुन्छ किनभने यसले शरीर निर्माण, फिगर र दुबै बिकिनी शरीर सहित फिजिक तत्वहरूको विस्तृत एरे समर्थन गर्दछ।
महिलाहरूको लागि एक मानक अनावर चक्र ज्यादातर IN10mg बाट 20mg प्रति दिन औषधि हो र प्राय: छ हप्ताको फटमा हुन्छ। जे होस्, केहि चक्रहरू 20mg बिते, अतिरिक्त आवश्यक छैन र oxandrolone साइड इफेक्ट पैदा हुन सक्छ।
यदि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ र छ हप्ता भन्दा बढीको लागि स्टेरोइड प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ,3हप्ताको अवधिमा4बाट6साताको अवधि सुरू गर्न र सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ।
पुरुषहरूको लागि अनवर चक्र
अधिकांश पुरुष प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्छन् वजन कम गर्न को लागी अनवर विशेष गरी जब तिनीहरू काटने प्रक्रिया / डाइटिंग चरणबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू पाउन को लागी 50mg प्रति दिन औषधि को लागी उपयुक्त शुरू Anavar खुराक को रूप मा। जहाँसम्म, एक पुरुष को रूप मा, तपाइँ सीमा को लागी प्रति दिन 80mg को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ, औषधि तपाईको शरीरको लागी सुरक्षित छ।
विचार Oxandrolone मूल्य कम्तिमा N2प्रति 10mg ट्याबको लागि हो, पुरुषहरूका लागि अनवर चक्र एकदम महँगो हुन सक्छ।
सही अनावर खुराक एक व्यक्तिलाई अर्कोमा फरक पार्दछ; एक लि gender्ग मा निर्भर गर्दछ र उनको / उनको स्वतन्त्र लक्ष्यहरु मा निर्भर गर्दछ।
सामान्यतया, एउटी आइमाईलाई समान परिणाम / लाभहरू प्राप्त गर्न एक मानिस भन्दा कम ओक्सान्ड्रोलोन खुराक चाहिन्छ। सामान्यतया, महिलाको लागि काट्ने अनवर चक्र दैनिक आधारमा 10mg मात्रामा हुन्छ। जे होस्, दैनिक खुराक 20mg को रूप मा उच्च जान सक्छ र यो इच्छित परिणाम ट्रिगर गर्न सक्छ, स्टेरॉयड को एक यस्तो उच्च खुराक एक महिला वायरलिंग लक्षण विकास गर्न बनाउन सक्छ।
एक पुरुष एथलीट जो 80mg प्रति दिनको सुरूवात अनवार खुराकलाई झुकाउन इच्छुक छ सबै भन्दा उपयुक्त हुनेछ। जे होस्, एक सानो खुराक अपनाउन सकिन्छ तर यो 30mg भन्दा कम हुनुहुन्न, अन्यथा यो सन्तोषजनक रूपमा प्रभावी हुँदैन।
अनुसन्धान र विभिन्न अनुसार अनवर रेडडिट समीक्षा, को मानक खुराक पुरुषहरूको लागि अनवर 50mg प्रति दिन हो।
कसरी Oxandrolone पेस गर्ने
पाउडर: प्रति 1 ग्राम ओक्सान्ड्रोलोन
उच्चतम एकाग्रता उत्पादन गरियो: 20 मिलीग्राम / मिली
ओक्सान्ड्रोलोन पाउडरको 1 ग्राम
1 बीकर जो तरलताको मात्रा समायोजन गर्न उपयुक्त छ
PEG 8 को 300 मि.ली.
2 मिलि 190 प्रूफ ग्रेन मदिरा
कहाँ Oxandrolone खरीद गर्न
एक मात्र ठाउँ जहाँ तपाईं कानूनी र उच्च-गुणवत्ता अनावर किन्न सक्नुहुनेछ एक इजाजतपत्र प्राप्त र कानूनी रूपमा विनियमित विक्रेताबाट। त्यो नोटमा, AASraw उत्पादनको स्रोतको लागि उत्तम स्थान हो।
AASraw ले ठूला-ठूला संश्लेषण र Oxandrolone को उत्पादन संग सम्झौता गर्दछ र हामी तपाईंलाई कुनै पनि मात्रा प्रदान गर्न सक्छौं अन्वेषक बिक्रीका लागि वा उपभोग अन्त्य गर्नुहोस् जबसम्म तपाईं आवश्यक आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ। हामी सीजीएमपी अन्तर्गत सञ्चालन गर्दछौं र हाम्रो ट्रयाकेबल गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीले हामीलाई शीर्ष खाच उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्दछौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सान्दर्भिक कानून र नियमहरूको दायरा भित्र काम गर्न मद्दत गर्दछ।
मेटा विवरण: Oxandrolone (Anavar) एक सिंथेटिक androgen र anabolic स्टेरॉइड (AAS) औषधि हो जुन यसको शक्ति र उर्जा-बढाउने क्षमताहरूको लागि धेरै लोकप्रिय छ। यो सबैभन्दा धेरै ज्ञात र प्रयोग हुने मौखिक एनाबोलिक स्टेरॉइड्स बीच हो। Oxandrolone दुबै पुरुष र महिला दुबै महिलाहरु लाई उपयोग गर्न को लागी सुरक्षित छ जब सही डोज पालन गरिन्छ।
डिमलि R आरएच, डी सान्ती एल: ओक्सान्ड्रोलोन गम्भीर जलेको पुनः प्राप्तिको बखत दुबला जन लाभ प्रेरित anabolic स्टेरॉइड को विच्छेदन पछि कायम छ। जलेको 2003 डिसेम्बर; 29 (8): 793-7। [पीएमआईडी: 14636753]
जोन Cabaj, "oxandrolone को संश्लेषण को लागी प्रक्रिया।" युएस प्याटेन्ट US20030032817, फेब्रुअरी १,, २००
करीम, ए, रन्ने, आरई, ज़गारेल्ला, जे।, र माईबाच, HI (१ 1973 14)। Oxandrolone स्वभाव र मानिसमा चयापचय। क्लिनिकल फार्माकोलजी र थेरापीटिक्स, १5()), 862२-869।।
रायती, एस, ट्रायस, ई।, लेविट्स्की, एल।, र ग्रोसम्यान, एमएस (१ 1973 126)। Oxandrolone र मानव विकास हार्मोन: छोटो बच्चाहरु मा विकास उत्तेजक प्रभाव तुलना। अमेरिकी जर्नल अफ डिसेजिस अफ चिल्ड्रेन, १२5 ()), 597 600--XNUMX००।
रोजेनब्लूम, AL, र Frias, JL (१ 1973 125) टर्नर सिन्ड्रोममा बढुवाको लागि Oxandrolone। अमेरिकी जर्नल अफ डिसेजिस अफ चिल्ड्रेन्स, १२3()), 385 387--XNUMX।।
स्ट्रस, आरएच, लिगेट, एमटी, र लान्नीज, आरआर (१ 1985 253) एनाबोलिक स्टेरोइड प्रयोग र दस वजन वजन प्रशिक्षित महिला एथलीटहरूमा ज्ञात प्रभावहरू। जामा, २19 (१)), २2871१-२2873।।
Tykerb (231277-92-2) - स्तन क्यानरको हत्यारा
SARM SR9009 शरीर सौष्ठव को लागी एक पूरा खरीद गाईड	कसरी Flibanserin एक महिलालाई सेक्स हार्मोनको रूपमा मद्दत गर्दछ